गृहमन्त्रीको ठाडो निर्देशनमा हट्यो २०० रुपैयाँ जरिवानाको प्रावधान ! यस्तो छ नयाँ नियम
ARCHIVE, SPECIAL » गृहमन्त्रीको ठाडो निर्देशनमा हट्यो २०० रुपैयाँ जरिवानाको प्रावधान ! यस्तो छ नयाँ नियम
काठमाडौँ - जथाभावी बाटो काट्नेलाई २०० रुपैयाँ जरिवाना तिराउने ट्राफिक प्रहरीको नियम खारेज हुने भएको छ । गृहमन्त्री जनार्दन शर्माको ठाडो निर्देशनमा जथाभावी बाटो काट्दा सर्वसाधारण यात्रुहरुबाट २ सय रुपैयाँ असूल्ने काम बन्द गर्न लागिएको हो ।
यो नियम आएदेखि ट्राफिकलाई हेर्ने नजर नै नकारात्मक भएको भन्दै यस्तो निर्देशन दिईएको गृह मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । तर जथाभावी बाटो काटेको पाइएमा टाफिक प्रहरीको जनचेतनामूलक क्लास भने लिनुपर्ने बताइएको छ ।